ကိုရင် လူထွက် မောင်ထူး – Hlataw.com
ကိုရင် လူထွက် မောင်ထူး
ကျုပ် ကိုရင်ဝတ်တော့ အဘတို့ဝတ်ခိုင်းလို့ သာ ၀တ်ရတာဗျ…။ စိတ်ပါလို့ဟုတ်ဘူး…။ ဒါပေမဲ့ ၀တ်ပြီးတော့လည်းကိုရင်ဘ၀ကို သဘောတော့ အကျသား…။ မနက် ဘုရားဝတ်တက်…အာရုံဆွမ်းစား..ပြီးတာနဲ့ဆရာတော်နဲ့ အတူ ဆွမ်းခံ လိုက်ရတယ်..။ ကျောင်းပြန်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုး ခဏနားပြီး နေ့ ဆွမ်းစား..၊ နေ့ လည် တစ်နာရီလောက်ကျတော့ ဆရာတော်က စာချပေးတာ လိုက်အံ ရတယ်..။ ဒီဟာတော့ ကျုပ်နဲ့ မကိုက်ဘူးဗျ..။ စာရေးတာ ဖတ်တာ တွက်တာ ချက်တာတွေကို စိတ်မ၀င်စားဘူး…။ ဆရာတော်က စာချပြီး အညောင်းအညာဆန့် ရင် ကျုပ်ကို ခေါ်တော့တာပဲ..။ ကျုပ်ကလည်း ကပ္ပိယကြီးဆီကသင်ထားတဲ့အတိုင်း သေသေချာချာ နင်းနှိပ်ပေးတော့ ကျုပ် စာမလိုက်နိုင်တာတောင် ဘာမှ မပြောတော့ဘူး..။ ကျုပ် ဉာဏ်ထိုင်းတယ်ဆိုတာလဲ ဆရာတော်ကြီးက သိမှာပေါ့ဗျာ..။ ဒီလိုနဲ့တစ်ဝါကနေ နှစ်ဝါ..သုံးဝါကျော်တော့ ကျုပ်အသက်လည်း ဆယ်ခုနှစ်နှစ်ကျော်လို့ဆယ့်ရှစ်နျစ် ပြည့်တော့မယ်..။ အဲ့ဒီမှာပဲ ကျုပ်ဘ၀ တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းဘို့ဖြစ်လာတာပဲဗျို့ ..။ တစ်ရက် ဆရာတော်ကြီး တစ်ဘက်ရွာ်ကြွသွားတုန်း .ကျောင်းမှာက ကျုပ်နဲ့ကပ္ပိယကြီးပဲ ကျန်နေခဲ့တာ…။
နေ့ ဆွမ်းစားပြီး ကျုပ်က ဘုရားခန်းကို ရှင်းလင်းနေတာဗျ..။ ပန်းအိုးတွေ ညှိုးနေတာနဲ့ပန်းတွေ လဲရအောင် ကပ္ပိယကြီးကို ပြောဘို့ဆွမ်းချက်ဆောင်လေးကို သွားတာ..အနားရောက်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့မချိမဆန့်နဲ့ ကြိတ်ပြီး ငြီးတ့အဲ သံကြားတာနဲ့ကျုပ်လည်း ချောင်းကြည့်မိတယ်..။ လား…လား ရွာအနောက်ပိုင်းက ကလေးအမေ မလှခင်ကို ကပ္ပိယကြီးက ခြေထောက်နှစ်ချောင်း ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး ဆောင့်နေတာကိုးဗျ..။ ဒါမျိုး တစ်ခါမှ ကျုပ် မမြင်ဘူးပါဘူး.။ ဒါပေမဲ့သူတို့ ကို ကြည့်ရင်း ကျုပ်တစ်ကိုယ်လုံး တစ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်လာတယ်ဗျ..။ သူတို့ ကလည်း ကျုပ်ရှိမှန်း မသိတော့ စိတ်ရှိတိုင်း ထင်တိုင်းကျဲနေကြတာကိုးဗျ…။ ကျုပ်လည်း သူတို့ မသိအောင် အသာလေး လှည့်ပြန်လာခဲ့တယ်..။ ညနေစောင်း ဆရာတော်ကြီး ပြန်ကြွလာတော့ ကျုပ်လည်း လူထွက်ခွင့်ပြုဘို့လျှောက်ပြီး လူဝတ်လဲလိုက်တော့တယ်..။ တားမရမှန်းသိတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်း တားမနေတော့ပါဘူး…။ အဲ့ဒီက စပြီး ကျုပ်ရဲ့ဘ၀သစ်တစ်ခု စဖြစ်လာတော့ တာပါပဲဗျာ.. ကျုပ် ..လူဝတ်သာ လဲလိုက်တယ်.. အိမ်လည်း မပြန်ဖြစ်ဘူး…။ ရွာနီးချုပ်စပ်..သွားချင်ရာ သွားနေတာပဲ…။ သွားရင်းလာရင်းနဲ့ ဟိုအိမ်က မောင်ထူးရေ..ထင်းလေးခွဲပေးပါလား..ဆိုလည်း ခွဲပေးလိုက်တာပဲ…ရေလေးခပ်ပေးပါလား ဆိုလည်း ခပ်ပေးလိုက်တာပဲ.. ဟဲ့ ထမင်းစားသွားလေ..ဆိုလည်း စားလိုက်တာပေါ့ဗျာ…။
ကျုပ်က စိတ်နဲ့ လူနဲ့ကပ်တာမဟုတ်ဘူး..။ ကပ္ပိယကြီးနဲ့မလှခင် ဆက်ဆံနေတာကိုပဲ မျက်စေ့ထဲ ပြန်မြင်ပြီး စိတ်က စွဲနေတာ…။ ကျုပ် လူထွက်မှန်းသိသွားကြတော့ အစ်မ ( အမေ ) ကလိုက်ခေါ်သေးတယ်ဗျ.. ။ ဒါပေမဲ့မပြန်ချင်ပါဘူး…။ ” ရွာ ထမှဲာ လုပ်စရာတွေ ရှိသေးတယ်ဗျ.. ” ပြောပြီး ခြေဦးတည့်ရာ သွားနေလိုက်တာပဲ..။ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ .ကျုပ်..မနေနိုင်တော့ဘူးဗျ..။ မလှခင်တို့ အိမ်ဘက် ရောက်သွားတယ်..။ ” အစ်မလှခင်…ဘာလုပ်ပေးစရာ ရှိလဲဗျ… ” ကျုပ်လည်း စကားမရှိ စကားရှာပြီး..အိမ်ဝိုင်းထဲ ၀င်သွားတယ်..။ အိမ်ရှေ့ ကွပ်ပျစ်မှာ ၀င်ထိုင်တော့..အစ်မလှခင်လည်း အိမ်ထဲကထွက်လာတယ်.။ ” ဟဲ့..ကိုရင်…အဲ…မောင်ထူး..နင်ဘယ်တုန်းက လူဝတ်လဲလိုက်တာလဲဟဲ့.. ဘာလို့လူထွက်လလိုက်တာလဲ ” ကျုပ်..အစ်မလှခင် တစ်ကိုယ်လုံးကို စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်နေမိတယ်…။ တောသူတောင်သားဆိုတော့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်က လုံးကျစ်နေတာ..ကလေးတစ်ယောက်မွေးပြီးပေမဲ့ သူ့ တင်ပါးကြီးတွေက အယ်နေတာပဲ…လျော့တိလျော့ယဲလည်း မဟုတ်ဘူးဗျ..။ နို့ ကြီးတွေကလည်း မြို့ က ဟင်းရည်သောက် ပန်းကန်လုံးကြီးလို တင်းရင်းနေတာပဲ..။ မျက်နျာလေးက နေဒဏ် လေဒဏ် ထိထားပေမဲ့ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားကြီးနဲ့ကျုပ် မျက်စေ့ထဲတော့ လှလိုက်တာဗျာ…..။ ” ဟဲ့..မောင်ထူး..နင် ဘာဖြစ်နေတာလဲ….အပ မှီနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်… ” ကျုပ် ပါးစပ်က အလိုလို ပွင့်ထွက်သွားတယ်ဗျ…။
” ကျုပ်..အစ်မလှခင်ကို ချစ်လို့ ဗျ…. ” ” ဟဲ့..တောက်တီးတောက်တဲ့..ဒီကောင်လေး..ဘာဖြစ်လဲ မသိပါဘူး.. ” ” ဟုတ်တယ်ဗျ…ဟိုတစ်ရက်က ဆွမ်းချက်ဆောင်မှာ အစ်မလှခင်နဲ့ကပ္ပိယကြီးတို့ကိုတွေ့ ပြီးကတည်းက ကျုပ်လဲ အစ်မလှခင်ကို ချစ်ချင်လို့လူထွက်လိုက်တာဗျ….” ” ဟဲ့..ဟဲ့..မဟုတ်က ဟုတ်က…ဒီကောင်လေးနဲ့ တော့ ခက်နေပါပြီ.. ” ” ကျုပ်ကိုယ်တိုင် မြင်တာပါဗျ…ကပ္ပိယကြီးက အစ်မလှခင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး…..” ” ဟဲ့..မောင်ထူး..လျှောက်ပြောမနေနဲ့..လာ..လာ..အိမ်ထဲရောက်မှ ပြော…. ” အစ်မလှခင် ခေါ်တာနဲ့ ကျုပ်လည်းအိမ်ထဲလိုက်ဝင်သွားတာပေါ့ဗျာ…အိမ်ထဲရောက်တော့သူ့ သားကမရှိဘူး… ရှေ့ ခန်းလေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တော့ အစ်မလှခင်က မေးတယ်. ..။ “ မောင်ထူး..အဲ့ဒီအကြောင်းတွေသူများကို လျှောက်မပြောရဘူးနော်….” “ ကျုပ်က အစ်မလှခင်ကို ချစ်ချင်တာပဲသိတာဗျ… “ “ ဒီကောင်လေးနဲ့ခက်ပါပြီ…..ကဲ..လာ…အစ်မပြောမယ်..နင့်အစ်ကို ကိုရင်မြက ဟိုဖက်ရွာက တင်ရီ နဲ့ယူပြီး ပြန်မလာတော့ဘူး.ဟဲ့..အဲ့ဒါနဲ့ကပ္ပိယကြီးနဲ့ငါ ဖြစ်မိတာပါဟယ်… သူများတွေ လျှောက်မပြောပါနဲ့ငါ ရှက်ကွဲရချည်ရဲ့“ “ အ့ဒဲါတော့ မသိဘူးဗျာ…ကျုပ် အစ်မလှခင်ကို ချစ်ချင်တယ်..ဒါပဲ သတိ ယ်.. “ “ ကဲ..ပြောမရလဲ..လာခ့ကဲ ယွ်… “ အစ်မလှခင်က ပြောပြီးတာနဲ့အခန်းကန့် ထားတဲ့အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားတော့ ကျုပ်လည်း မအူမလည်နဲ့လိုက်ဝင်သွားလိုက်တယ်..။
အခန်းထဲရောက်တော့ အစ်မလှခင်က ထမိန်ရင်လျားနဲ့ကြမ်းခင်းပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ပြီး အိပ်နေပြီ… ကျုပ်လဲ အနားတိုးကပ်ပြီး ၀င်ထိုင်လိုက်တယ်…ပြီးတော့ ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကို အငမ်းမရ နမ်းပစ်လိုက်တယ်… လက်တေကွ လည်း ရင်လျားထားတဲ့ထမိန်ပေါ်ကနေ နို့ ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုပ်ခြေနေမိတယ်..။ တောင့်တောင့်ကြီး လုပ်နေတဲ့ အစ်မခင်တစ်ယောက် နို့ ကြီးတွေကို ဆုပ်ခြေခံရတော့ နည်းနည်းလှုပ်ရှားလာတယ်ဗျ..။ လက်တစ်ဖက်ကကျုပ်ပေါင်ကိုလာကိုင်တယ်…ပါးပြင်ကိုနမ်းနေရင်းကနေ..ထမိန်ကို ဖြေလိုက်ပြီး နို့ တွေကို တစ်ဖက်တစ်ချက် စို့ ပစ်လိုက်တယ်…နို့ သီးခေါင်းလေးတွေကို စို့ လိုက် ..နို့ အုံကိုပါ စို့ လိုက်တော့ အစ်မလှခင် ရင်ဘတ်ကြီးကော့လာပြီး ပေါင်ကို ကိုင်ထားတဲ့ လက်က ကျုပ် လီးကို လာကိုင်တယ်…။ ပြီးတော့ ပုဆိုးပေါ်ကနေပဲ ကျုပ်လီးကို ပွတ်သပ်ပေးနေတာ..တဖြည်းဖြည်းနဲ့လီးက မာသထက် မာတောင်လာတယ်..။ ကျုပ်က နို့ စို့ နေရင်း ထမိန်ပေါ်ကနေ ဆီးစပ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို ပွတ်နေမိတယ်.. နူးညံ့တ့ေဲ စာက်ဖုတ်ကြီးရယ်. အမွှေးတေရွ ယ် စမ်းမိလိုက်တယ်…။ .” အစ်မခင် ကျုပ် လုပ်ချင်ပြီဗျ… ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ “ “ မောင်ထူးရယ် နင်နဲ့ တော့ ခက်ပါပြီ…ကဲ..ပုဆိုးချွတ်လိုက်.. “ ကျုပ် ..ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်တော့ အစ်မခင်က ကျုပ်လက်မောင်းကို လှမ်းကိုင်ပြီး သူ့ ကိုယ်ပေါ်ကို ဆွဲယူလိုက်တယ်.ကျုပ်..အလိုက်သင့်နေရာယူလိုက်တော့ ကားထားတဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ရောက်သွားတယ်ဗျ..။ ပြီးတော့ အစ်မလှခင်က ကျုပ်လီးကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး သူ့ စောက်ဖုတ်ဝမှာ တေ့ပေးတယ်…. ” ဆောင့်…မောင်ထူး..ဆောင့်..ဆောင့် “ ကျုပ်လဲ အားရပါးရ ဆောင့်ပစ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ….မ၀င်ဘူးဗျ…အပေါ်ကို ချော်ထွက်သွားတယ်..။
အားယူပြီး ဖင်ကိုနောက်ဆုတ်လိုက်တာ အပေါက်နဲ့ လွဲသွားတယ်…။ “ ဟင်… ” တဲ့ …အစ်မလှခင်က စိတ်ပျက်သံထွက်လာပြီး နောက်တစ်ခါ လီးကိုကိုင်ပြီး ပြန်တေ့ ပေးတယ်…လက်ကကိုင်ထားရင်း “ ထိုးသငွ်းလိုက် မောင်ထူး… ထိုးထ့လဲိုက်တော့ “ တဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ အလိုက်သင့်ထိုးသွင်းလိုက်တော့ လီးက စောက်ဖုတ်ထဲ ချောချောချူချူ ၀င်သွားတယ်..။ အထဲရောက်သွားတော့ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေရဲ့နုညံ့တဲ့အတွေ့ အထိနဲ့ချောမွတ်စိုစွတ်နေလို့ကျုပ် အံ့ကြိတ်ထားရတယ် “ အစ်မခင် ကောင်းလိုက်တာ အစ်မရယ်… “ “ ကောင်းရင်လဲ လိုးလေ..မောင်ထူးရယ်…အစ်မလည်း ကောင်းချင်တယ်…ဆောင့်…ဆောင့် “ ကျုပ် ဆောင့်လိုက်တာ အချက် နှစ်ဆယ်လောက်ကျတော့ လီးတစ်ချောင်းလုံး ကျဉ်တက်လာပြီး “ အစ်မ..ကျုပ် ဘာဖြစ်လဲ မသိဘူးဗျ…လီးက ကျဉ်လာတယ်…ပြီးတော့ ကောင်းလည်းကောင်းတယ်ဗျ.” ပြောလို့ မဆုံခင်..ကျုပ်လီးက အရည်တွေ တစ်ပြွတ်ပြွတ်နဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ပန်းထွက်သွားတယ်… ” ကောင်းလိုက်တာဗျာ….ဘယ်လိုကောင်းမှန်း မသိဘူး…” “ မင်းကတော့ ကောင်းတာပေါ့ မောင်ထူးရယ်…အစ်မသာ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့မကောင်းဘူး… ပြီးတော့ မောင်ထူး လီးက သေးတယ်ဟ… “ အစ်မခင် မကောင်းဘူးဆိုလို့ကျုပ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားပေမဲ့ ကျုပ်လီးကို သေးတယ်ပြောလို့စိတ်က မကျေနပ်ချင်ဘူး…။ “ အစ်မ လီးကြီးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျ.. “ “ အေး…ငါပြောမယ်…သေသေချာချာ နားထောင်…… “ အေး…ငါပြောမယ်…သေသေချာချာ နားထောင်..မောင်ထူးတို့အိမ်ဘေးမှာပေါက်နေတဲ့နန်းလုံးကြိုင်ပင် သိတယ်မဟုတ်လား…အေး..အ့ဒဲီအမြစ် လက်တစ်ဆစ်လောက် တူးလာခဲ့…ပြီးတော့ ခွေးလေးယားအမြစ် လည်း တူးလားခဲ့…အစ်မ လုပ်ပေးမယ်…အခုတော့ ပြန်တော့ အဲ့ဒါတွေ ရမှ တစ်ခါလာခဲ့..ပြီးတော့ ဒီအကြောင်းတွေ ဘယ်သူမှ မပြောရဘူးနော်..ပြောရင်တော့…အစ်မကို မင်းချစ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး…မြဲမြဲမှတ်ထား” မပြန်စဖူး..ပြန်လာတ့ကျဲုပ်ကို အစ်မက ၀မ်းသာအားရ ဆီးကြိုတယ်..အဘကတော့ ဘာမှ မပြောဘူး..ပြောလဲ ထူးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိနေလို့ဖြစ်မယ်.။
ကျုပ်ကတော့ အစ်မ ချကျွေးတဲ့ ထမင်းဟင်းစားပြီး မယောင်မလည်နဲ့ နန်းလုံးကြိုင်အမြစ်ကို တူးပြီး ရွာပြင်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်…။ သချုင်္ိင်းအစပ်မှာ ပေါက်နေတဲ့ခေွး လှေးယားမြစ်ကို တူးရဦးမှာကိုဗျ..။ ခေါင်းမှာ ပေါင်းထားတဲ့ ပုဆိုးပိုင်းဖြေပြီး ခြုံလိုက်တယ်..ပြီးမှ.ခွေးလှေးယားမြစ်ကို တူးရတယ်..မဟုတ်လို့ က..တစ်ကိုယ်လုံး ယားတော့မှာ…။ အ့ဒဲါတေရွ တာနဲ့ ကျုပ်လည်း အစ်မလှခင်ဆီ သွားတော့တာပဲ…ရောက်တော့ မှောင်ရီပျိုးနေပြီ… အစ်မလှခင် ကလေးကတော့ ထမင်းစားသောက်ပြီး ရွာလယ်ပိုင်းမှာ သွားဆော့နေတယ်ထင်တယ်ဗျ…အိမ်မှာ အစ်မလှခင်တစ်ယောက်တည်း ရှိတယ်…။ ကျုပ်..၀င် လာတာတွေ့ တော့ သူ လန့် သွားတယ်…။ “ ဟ့…ဲ မောင်ထူး…ဘာလုပ်မလို့ လဲ… “ “ အစ်မပြောတာတွေ ရပြီလေ…အစ်မပဲ အဲ့ဒါတွေ ရရင် ပြန်လာဆိုပြီးတော့.. “ “ နင့်နဲ့ တော့…ခက်ပါပြီ မောင်ထူးရယ်… ရက်တောင် မဆိုင်းဘူး.. ဟင်း.. “ “ သိဘူးလေဗျာ…အစ်မပဲ ရရင်ပြန်လာခဲ့ဆိုလို့ ..လာခဲ့တာ…ကျုပ်က မစောင့်နိုင်တော့ဘူးဗျ.. “ “ ကဲ..ကဲ..ဟုတ်ပါပြီ… လာ..လာ “ ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အိမ်ခန်းထဲက သနပ်ခါးသွေးတဲ့ ကျောက်ပြင်ကို ယူလာတယ်…ပြီးတော့ အင်တုံလေးနဲ့ ထည့် ထားတဲ့ ဆန်ဆေးရေ.နဲ့နန်းလုံးကြိုင်မြစ်ကို သွေးလိုက်တယ်… ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးသွေးလို့ ရတော့ ကျုပ်ကို အတွင်းခန်းထဲ ခေါ်ပြီး ပုဆိုးချွတ်ခိုင်းတယ်….. ပြီးတော့ သွေးထားတဲ့ အရည်တွေနဲ့ကျုပ်လီးကို လိမ်းပေးတာဗျ……. ကျုပ်လီးကလည်း အစ်မလှခင် ကိုင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်း ထလာတယ်… အဲ့လို လိမ်းပေးတော့ အစပိုင်းမှာ အေးနေတာပဲ… .ဒါပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လီးတစ်ချောင်းလုံး ပူရှိန်း ပူရှိန်းဖြစ်လာပြီး အစ်မလှခင် လက်ထဲမှာပဲ လီးက တဖြည်းဖြည်း ကြီး လာလိုက်တာ..အစ်မလှခင် လက်နဲ့ တောင် မဆန့် တော့ဘူး…လီးကလည်း ပိုပြီး ပူရှိန်း.ပူရှိန်း ဖြစ်လာတယ်..အစ်မလှခင်လက်နဲ့ရှေ့ တိုးနောက်ငင် ပွတ်သပ်ပေးနေရင်း..အရင်းက ဆုပ်ကိုင်ထားတာတောင် အပြင်မှာ လက်သုံးလုံးလောက်ပိုထွက်နေတယ်….ကြည့်ရင်း..ကြည့်ရင်း ကျုပ် ကြောက်လာတယ်ဗျ… “ အစ်မ…ကျုပ်လီးက ပူပြီး တစ်အား တင်းလာပြီဗျ.. ကျုပ် ကြောက်လာပြီ… “ “ မကြောက်နဲ့မောင်ထူး… စလိမ်းရင် အဲ့ဒီလိုပဲ..ပြီးမှ အစ်မ လုပ်ပေးမယ်….” အစ်မလှခင်က ပြောလည်း ပြော ပွတ်လည်းပွတ်ပေးနေတာ… လီးတစ်ချောင်းလုံး အကြောတွေ ထောင်ပြီးခေါင်းကလည်း ပြောင်တင်းနေပြီ….ဆင်စွယ်ငှက်ပျောသီးကြီး ကျနေတာပဲ…။
အစ်မလှခင်ကပါးစပ်က ပြောလဲပြောရင်း လက်ကလီးကိုဆွဲပြီး နောက်ဖေးကပြင်ကို ခေါ်သွားတယ်.။ ပြီးတော့ရေတစ်ခွက်လောင်းပြီး လီးတစ်ချောင်းလုံးကို သေသေချာချာ ရေဆေးပေးတယ်. .ရေနဲ့ လောင်းလိုက်လို့ အေးသလိုဖြစ်သွားပေမဲ့ လီးကြီးပူပြီး မာတင်းနေတုန်းပဲဗျ..။ ရေဆေးပြီးတော့ အစ်မက ကျုပ်ကို အိမ်ခန်းထဲခေါ်သွားတယ်..ပြီးတော့ ကျုပ်ကို ပက်လက်လှန်အိပ်ခိုင်းပြီး မိုးပေါ်ထောင်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကို ငုံစုတ်တော့တာပဲ..သူ့ နှုတ်ခမ်း နဲ့ဆွဲစုတ်လိုက်တိုင်း လီးက ပိုကြီးလာတယ်လို့ တောင် ထင်ရတယ်..။ ခဏနေတော့ ထမိန်ကို ချွတ်ပြီး အပေါ်ကနေခွလိုက်တယ်….။ လက်တစ်ဖက်နဲ့ လီးကိုသေသေချာချာကိုင်ပြီး သူ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ပွတ်ပွတ်နေလိုက် တာ …လီးထိပ်မှာ အရည်တွေ ရွှလဲာတာ သတိထားမိလိုက်တယ်..ပြီးတော့မှ ဖင်ကိုအသာကြွပြီး ထိုင်ချလိုက်တာ လီးကြီးက ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းနဲ့ အစ်မလှခင်စောက်ဖုတ်ထဲ တိုးဝင်သွားတယ်…။ အစ်မလှခင်ပါးစပ်က ညီးသံထွက်လာတယ်..။ “ ရှီး..အင်း..မောင်ထူး..ခွေးလှေးယားမြစ်..ပါလာတယ်မဟုတ်လား…အဲ့ဒါကို ပါးစပ်ထဲ ကိုက်ထားလိုက်… အင့်..ရှီး..” ပြောလည်းပြောဆောင့်လည်းဆောင့်နဲ့ ..ကျုပ်ကတော့နေ့ လည်က လိုးရတာထက်…အခု လီးအကြီးကြီးဖြစ်လာမှ လိုးရတာကို သဘောကျနေတယ်…။ ဒါနဲ့ခွေးလှေးယားမြစ်ကို အံကြိတ်ပြီး ကိုက်ထားလိုက်တယ်. ..နည်းနည်းတော့ ခါးသက်သက်နိုင်တယ်ဗျ…။ ဒါပေမဲ့ နေ့ ခင်းကလို ခဏလေးနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး.. အခုကို အစ်မလှခင်ဆောင့်နေတာ တော်တော်ကြာပြီ. ရင်ဘတ်ပေါ်လက်ထောက်ပြီး ဆောင့်နေရာက တအင်းအင်း အသံထွက်ပြီး ကုတ် ကပ် တွန့် လိမ်လာတယ်…။
“ ..အီး.ရှီး..အင့်..ကောင်းလိုက်တာ မောင်ထူးရယ်..လီးကြီးကြီးနဲ့ မှ ခံလို့ ကောင်းတာ..အင်း..အင်း..ပြီးတော့မယ်..ပြီးတော့မယ်..အင့်ဟင့်..အား..ရှီး..” အစ်မလှခင် စောက်ဖုတ်ထကဲ အရည်တွေ ပိုစိုရွှလဲာပြီး ကျုပ်ပေါ်မှောက်ယက် ကလေးနဲ့ငြိမ်သွားတယ်…။ အင်း ကျုပ်က မပြီးသေးတော့ အစ်မလှခင်ကို ဘေးကို တွန်းလှိမ့်ပြီး သူ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲထောင်လိုက်တယ်..။ ပေါင်နှစ်ချောင်း ကားသွားတာနဲ့စောက်ဖုတ်ကလည်း ဟစိစိလေးဖြစ်သွားတာ..အတွင်းသားလေးတွေက စောက်ရည်တွေနဲ့စိုစွတ်ပြီး နီရဲနေတာပဲဗျာ..ကျုပ်လည်း စောက်ဖုတ်ကိုသေသေချာချာ မမြင်ဘူးတော့ လက်နဲ့ ဆွဲဟလိုက်ပြီး အနားကပ်ပြီး ကြည့်ရင်း နမ်းချင်စိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့စောက်စိနေရာလေးကိုမှန်းပြီး ပါးစပ်နဲ့စုတ်နမ်းလိုက်တယ်…” အား..ရှီး..မောင်ထူး..ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲကွယ်..အစ်မ မနေတတ်ဘူး.. “ မနေတတ်ဘူးပြောနေပေမဲ့ ကျုပ်ခေါင်းကို ဆွဲပြီးကပ်ထားတယ်..ကျုပ်လည်း စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းလေး တွေကိုယက်လိုက် လျှာကို လိပ်ပြီး အတွင်းထဲထိုးထဲ့လိုက်နဲ့ စိတ်ကူးပေါက်ရာ လုပ်ပစ်လိုက်တယ်..”.. တော်တော့..မောင်ထူး..စောက်ဖုတ်ထဲပဲ လီးကို ထဲ့လိုက်တော့” တင်ပါးနှစ်ဖက် ကော့နေရင်းကနေ ထ့ခဲိုင်းနေတာနဲ့ ကျုပ်လည်းအနေအထားပြင်ပြီး ပေါင်ကြီးနှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ် တင်လိုကတ် ယ်..ပြီးမှ လီးကို လက်နဲ့ သေသေချာချာကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားတစ်လျှောက် ပွတ်တိုက်တော့ ညည်းသံထွက်လာပြန်တယ်..” အင့်.လိုးတောလေ မောင်ထူးရယ်..အစ်မ မနေတတ်တော့ဘူး… “ ဒါနဲ့ ခေါင်းမြုတ်ယုံလေး.ထိုးထည့်လိုက်တယ်.. ။
“ အာ့..အင်းဟင်း ..” ခဏ လောက် အထုတ်အသွင်းလုပ်ပြီး လီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်အောင် ဆောင့်ထည့်လိုက်တယ်…။ “အင့်..ဖြေးဖြေးမောင်ထူး” လီးတစ်ချောင်းလုံးက စောက်ဖုတ်ထဲမှာ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းဆိုပေမဲ့ စောက်ရည်တွေနဲ့ မို့အထိအတွေ့ က နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ ဗျ..တစ်ခါတစ်ခါ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေက ရှုံချည်ပွချည်နဲ့..လီးကို ဆွဲညှစ်နေတာကြနေတာပဲ..လီးကိုအထဲမှာ ထည့်ထားရင်း အစ်မလှခင်ရဲ့ နို့ တွေကို စို့ ပေးနေတော့ ရင်ဘတ်က ကော့ကော့လာသလို တင်ပါးတွေကလဲကြွကြွပြီး လှုပ်ရှားလာတယ်…ဒါနဲ့လီးကို အသာဆွဲထုတ်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် လုပ်ပေးလိုက်တယ် အစ်မလှခင်က ကျုပ်တင်ပါးကို ကိုင်ပြီး ဆွဲဆွဲဆောင့်လာတော့ ကျုပ်လည်း မညှာတော့ဘူး..လီးကို အဆုံးဆွဲထုတ်ပြီးအရင်းထိရောက်အောင် ဆောင့်တော့တာပဲ..” အား.အင့်..ရှီး..ဆောင့်..ဆောင့်..အင်း..အားရပါးရဆောင့်နော်..ရှီး “ ဆိုပြီး ဖင်ကိုကော့ကော့ပေးလိုက် စကောဝိုင်းသလို လုပ်လိုက်နဲ့ကျုပ်လည်းကြာတော့ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး..။ “အစ်မ ကျုပ်ပြီး တော့မယ်ထင်တယ်..ကောင်းလာပြီဗျ..” “ အစ်မလဲ ပြီးတော့မှာ ..ဆောင့်ဆောင့်..အား..အီး..” နောက်အချက် ၂၀ လောက်ဆောင့်လိုက်တော့ အစ်မလှခင်လည်း ကျုပ်ကို တစ်အားဖက်ပြီး ပြီးသွားတယ်..။ သူပြီးတ့အဲ ချိန်စောက်ဖုတ်ကို ရှုံ့ လကိုပွလိုက်နဲ တစ်အာ့းညှစ်နေတော့ ကျုပ်လဲဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့ မရတော့ဘူး..စိတ်ရှိလက်ရှိဆောင့်ပြီး သူ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို အရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်တော့တယ်…။ သူ့ ဘေးမှာလှဲနေရင်း အစ်မလှခင်ကို ဖက်ထားလိုက်တယ်..။
“ အစ်မ အခု လီးအကြီးကြီးနဲ့ ဆိုတော့ အစ်မကောင်းမှာပေါ့နော်.. ပြီးတော့ လီးက အမြဲတမ်းကြီးနေမှာလားဗျ “ “ လီးကြီးတော့ ခံလို့ ကောင်းတာပေါ့မောင်ထူးရယ်…အခု ဆေးလိမ်းပြီးပြီဆိုရင် အမြဲကြီးနေမှာ..မောင်ထူးကို မိန်းမတွေဝိုင်းနေမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်.ဟီးဟီး.” ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ဖက်ပြီးစကားပြောနေတုန်း အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ ခြေသံနဲ့ အတူ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အော်ပြောသံကတစ်ပါတည်းကပ်ပါလာတယ်..။ “ လှခင်ရေ…ဟင်းလာပို့ တာဟေ့.. ဘယ်ရောက်နေတာလဟဲ့ …ဲ “ ပြောပြောဆိုဆိုဝင်လာတဲ့မိန်းမက အိပ်ခန်းအပေါက်ရောက်တော့ အထဲ လှမ်းကြည့်ပြီး “ အေဲ တာ့…..” ဆိုတဲ့အသံနဲ့ အတူ ပါးစပ် ပိတ်သွားတော့တယ်…။ “ ဟယ်…ကျင်မြ…နင်..နင်..ဒီအကြောင်းတွေ လျှောက်မပြောပါနဲ့ နော်…နော်.. “ အစ်မလှခင်က ပါးစပ်ကလည်းပြောအကျီင်္အ ၀တ်အစားတွေကောက်ဝတ်ရင်းမကျင်မြရဲလက်မောင်းကို လှမ်းကိုင်လိုက်တယ်..။ မကျင်မြကတော့ အစ်မလှခင် ပြောတာကို မကြားသလိုနဲ့မောင်ထူး ပေါင်ကြားက မတောင့်တတောင် လီးကြီးကို ကြက်သေသေပြီး ကြည့်နေတယ်.။ မောင်ထူးလီးကြီးကတစ် ချီလိုးထားပြီးတာတောင် သိပ်ပြီးမာန်မကျသေးတော့ မကျင်မြကို ဆွဲဆောင်နေသလို ဖြစ်နေတာ.။ အစ်မလှခင်က မကျင်မြရဲ့ အကြည့်တွေကို သဘောပေါက်ပြီး မောင်ထူးကို လှမ်းပြောလိုက်တယ်..။ “ ဟဲ့မောင်ထူး..နင့်အစ်မကို တောင်းပန်လိုက်လေ…လာ..လာ “ အစ်မလှခင်က မကျင်မြလက်က ဟင်းပန်းကန်ကို ယူလိုက်ပြီး အနောက်ဘက်ကို ထွက်သွားတယ်..။
ကျုပ်လဲ အစ်မလှခင်ပြောတာနဲ့ ယောင်တိယောင်တောင်နဲ့ မကျင်မြအနား လျှောက်သွားလိုက်တယ်..။ မကျင်မြကတော့ လမ်းလျှောက်ရင်း တန်းလန်းတန်းလန်း ဖြစ်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးဆီပဲ လိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျ..။ အနားရောက်တော့ မကျင်မြရဲ့ လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို လှမ်းကိုင်ပြီး “ မမမြ..ဒီအကြောင်းတွေ ဘယ်သူမှ မပြောပါနဲ့ နော်..အစ်မလှခင်ကို သနားလို့ ပါ.. မမမြ ခိုင်းတာ ကျုပ်လုပ်ပေးပါမယ်. ထင်းခွဲပေးရမလား..ရေခပ်ပေးရမလားဟင်.. “ လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုလှုပ်ခါရင်းပြောလိုက်တာ မကျင်မြရဲ့လက်က ကျုပ်လီးကို လာလာထိပါရောလားဗျာ..။ အဲ့ဒီတော့မှ..လီးကလည်းပိုပြီး ထောင်မတ်လာပြီး မကျင်မြရဲ့ ဆီးခုံကို သွားထောက်မိနေတော့တယ်..။ မကျင်မြမှာ ဆီးခုံကို ပူနွေးမာတောင်နေတဲ့လီးကြီးနဲ့ အထောက်ခံထားရတော့ လူက ပျော့ခွေချင်သလို .အားမရှိတော့သလို ဖြစ်သွားရတယ်..။ ကလေး အခါလည်မှာယောင်္ကျားက ပိုးထိပြီး ဆုံးသွားကတည်းက ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ မှ မဆက်ဆံခ့ရဲ တော့..မောင်ထူးလီးကြီးနဲ့ အထောက်ခံထားမိတာနဲ့စိတ်က လှုပ်ရှားပြီး အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်သွားလို့မောင်ထူးကို အလိုလို ဖက်နေမိသား ဖြစ်သွားရတယ်..။ ကျုပ်ခါးကိုမကျင်မြ လာဖက်တော့ ကျုပ်လည်း ပါးလေးတွေ နဖူးလေးတွေကို နမ်းပစ် လိုက်တယ်..။ မကျင်မြက ခါးကိုဖက်ထားရာကနေ.ကျုပ်ပါးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ပြီး ကျုပ်နှုတ်ခမ်းနှစ်ဖက်ကို စုတ်လိုက်တယ်..။ ကျုပ်နှုတ်ခမ်းကြားထဲ လျှာက၀င်လာပြီး ကျုပ်လျှာကို ဆွဲယူပြီး ဆွဲဆွဲစုတ်လိုက်တာ ဖင်ကိုကော့သွားတာပဲ..။ မကျင်မြ နှုတ်ခမ်းကိုစုတ်နေတုန်း ကျုပ်လက်တွေကလည်း သူ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ဆုပ်ချေနေမိတယ်.။ တင်ပါးကြီးက ကားနေသလို ရင်ဘတ်ချင်းအပ်ထားတဲ့ သူ့ နို့ ကြီးတွေကလည်း အကြီးကြီးတွေ..အိနေတာပဗျဲာ..။
အ့ဒဲိအချိန် အစ်မလှခင်က အိမ်ရှေ့ တံခါးကို မင်းတုန်းထိုးလိုက်ပြီး ပြန်ရောက်လာတယ်..။ “ အထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေး နေလေ. ကျင်မြရဲ့“ မကျင်မြလက်ကိုဆွဲပြီး အခန်းထဲခေါ်သွားတယ်.။ ဖျာပေါ်ဘေးချင်းယှဉ်လှဲလိုက်ပြီး ကျုပ်လက်က သူ့ စောက်ဖုတ်ပေါ် ရောက်သွားတယ်.။ ထမိန်ပေါ်က ဆီးခုံကို ပွတ်နေရင်း အားမရတာနဲ့ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်..။ ဆီးခုံပေါ်ကနေ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် လက်ခလယ်နဲ့ဆွဲပွတ်လိုက်တော့ လက် ချောင်းက အကွေဲ ကြာင်းထဲ ကနေ.စရွှဲေဲ နတဲ့ အရည်တွေကို စမ်းမိလိုက်တယ်ဗျ.။ ဒါနဲ့အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်ပွတ်နေရင်းကစောက်ဖုတ်အ၀ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်တော့ မကျင်မြ ကော့သွားတယ်..။ ကျုပ်လည်း သူ့ ရဲ့ နှိပ်သီးအင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး နို့ ကြီး တွေကိုပါ စို့ လိုက်တယ်..။ မကျင်မြ ရင်ဘတ်တွေလည်းကော့ ဖင်ကလည်းကော့ကော့လာတယ်..။ ညီးသံလေးတွေလည်း ထွက်လာတယ်..။ “ မမမြ…ကျုပ်..ကျုပ် လုပ်ရတော့မလားဟင်.. “ လို့ မေးလိုက်တော့..မျက်လုံးဖွင့်ပြီး အင်း လို့ပြန်ပြောတယ်..။ ဒါနဲ့ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးပဲ..ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားဝင်ပြီး ကျုပ်လီးနဲ့မကျင်မြရဲ့ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်ပွတ်တိုက်လိုက်တယ်..။ “ အင်း….. “ ဆိုတဲ့ ညီးသံနဲ့အတူ တင်ပါးနှစ်ဖက်က ကော့လာပြီး လီးနဲ့ စောက်ဖုတ်အပေါက်ဝကို လိုက်တေ့ပေးလာတယ်..။ ခေါင်းလေးမြုတ်ယုံ သွင်းလိုက်တာတော့ ကျုပ်ရင်ဘတ်ကိုတွန်းပြီး..ဖြေးဖြေးလုပ်..မောင်ထူး..ဆိုပြီး တားလာတယ်.။ အစ်မလှခင်က ဘေးကကြည့်နေရာက အနားရောက်လာပြီး မကျင်ြမရဲ့ နို့ တွေကို ဆုပ်ခြေ ပေးတယ်..။
မကျင်မြရဲ့ လည်ပင်းတွေနားလေးတွေနား လျှာနဲ့ လိုက်ယက်ပေးတော့ မကျင်မြတင်ပါးကြီးတွေ မြောက်တက်လာပြန်တယ်..။ ကျုပ်လည်း တ၀က်လောက်ရောက်အောင် ထိုးသငွ်းလိုက်တာ..အရည်တေရွှေဲ နတြဲ့ကားထဲက ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ်နဲ့ တိုးဝင်သွားတယ်..။ “ အား..ဖြေးဖြေးလုပ်ပါမောင်ထူးရယ်..မင်းလီးကြီးက ကြီးလွန်းအားကြီးတယ်ဟ..ရှီးးး အစ်မက ယောင်္ကျားနဲ့ မနေရတာ သုံးနှစ်လောက်ရှိတော့နည်းနည်း နာချင်တယ်..” “ ခဏနေ..ကောင်းသွားမှာပါ မမမြရယ်..ကျုပ် ဖြေးဖြေး လုပ်ပေးမှာပါ “ ပြောရင်းနဲ့ ဘဲ စောက်ဖုတ် ထေဲ ရာက်နေတ့လဲီးကို တစ်ဝက်လောက်နဲ့ ဖြေးဖြေးချင်းဆောင့်ပေးလိုက်တယ်..။ ခဏကြာတော့.လီးမှာအရည်တွေ နဲ့ အ၀င်အထွက်ကောင်းလာတယ်…” အင်း..ဆောင့်..ဆောင့်တော့ မောင်ထူး.အစ်မ ခံနိုင်ပြီ ထင်တယ်..အား..ဆောင့်..ဆောင့် “ ကျုပ်လည်းဆောင့်ရင်းဆောင့်ရင်းနဲ့တစ်ဖြေးဖြေးချင်း ဆောင့်လိုးနေတာ လီးတစ်ချောင်းလုံး အရင်းထိအောင် ထိုးထဲ့လိုက်တယ်..။ အင့်.ကနဲ တစ်ချက်အသံထွက်ပြီး အံကိုကြိတ်ပြီး မကျင်မြက ကော့ကော့ပေးလာတယ်..။ ဒါနဲ့ ကျုပ်လည်း အားရပါးရ ဆောင့်လိုးလိုက်တာ..” အား..အား..ဆောင့်ဆောင့်မောင်ထူး..အစ်မပြီးတော့မယ်.ဆောင့်ဆောင့်..အင့် “ လို့ ပြောရင်း ကျုပ်လက်မောင်းတွေကို တအားဖျစ်ညှစ်..စောက်ဖုတ်ကလည်း အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ လီးကို ဖျစ်ညှစ်ပြီး ပြီးသွားတယ်..။ ကျုပ်ကမပြီးသေးတော့ ဆက်ဆောင့်တာပေါ့..သူပြီးသွားချိန် ဆက်ဆောင့်နေတော့..အရှိန်ကကျမသွားဘူး..ပြန်ပြီးကော့ပေးလိုက် စောက်ဖုတ်ကို ရှုံ့ လိုက် ညှစ်လိုက် နဲ့ ..ဆက်လုပ်နေတယ်..။ ဒါနဲ့“ အစ်မ .လေးဘက်ထောက်လိုက်ပါလားဟင်..ကျုပ် နောက်ကနေလိုးပေးမယ် လေ “ ဆိုပြီး လီးကို ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်..။
မကျင်မြက စောက်ဖုတ်ထဲက လီးကြီး ပြန်ထုတ်သွားတော့ ဟာတာတာကြီး ဖြစ်နေတာနဲ့အမြန်လေးဘက်ထောက်ပေးလိုက်တယ်..။ တင်ပါးနှစ်ခုကြားကစောက်ရည်တွေ စိုရြွှဲပီး ပြူးထွက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်အ၀မှာ လီးကို တေ့ မလို လုပ်တုန်း..အရည်တေရြွှဲပီး ပြောင်တင်းနေတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကို အစ်မလှခင်က လှမ်းကိုင်လိုက်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ငုံစုတ်လိုက်တယ်…။ “ အား…ရှီး.. အစ်မလှခင်..နေဦးလေ..မမမြကို ကျုပ်လိုးလိုက်ဦးမယ်..” အ့ဒဲီတော့မှ စုတ်နေတာကိုရပ်ပြီး လီးကြီးကိုလက်နဲ့ ကိုင်ရင်း မကျင်မြရဲ့စောက်ဖုတ်အ၀မှာ လီးကိုတေ့ပေးတော့တယ်..။ မကျင်မြကလည်း ဖင်ကြီးဘယ်ညာယမ်းပြီး လီးကြီးကို လိုက်တေ့ နေတယ်..။ စောက်ဖုတ်အ၀နဲ့ တည့်သွားတာနဲ့ ကျုပ်လည်း တစ်ဝက်လောက်ဝင်အောင်ဆောင့်သွင်းလိုက်တယ်..။ စောက်ရည်တေရွှေဲ နပေမဲ့လီးက တစ်ထစ်ချင်းဝင်သွားတယ်.။ ခါးကိုနှိမ့်ပြီး ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်ထားတဲ့တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရကိုင်ပြီး ဆွဲဆွဲဆောင့်ပစ်လိုက်တယ်..။
မကျင်မြက ခေါင်းလေးမော့သွားပြီး အံကိုကြိတ်ထားရတယ်..။ ဆောင့်ချက်ကပြင်းသလို လီးကလည်းကြီးတော့ ဆောင့်လိုက်တိုင်း အသံထွက်အောင် ညီးတွားမိတယ်.။ “ မောင်ထူး..ဆောင့်ဆောင့်..အစ်မ ထပ်ပြီးချင်လာပြီ… အီး..ရှီး “ ကျုပ်လည်းစိတ်ရှိလက်ရှိ ဆောင်ပစ်လိုက်တာ..အသံတွေကိုဆူညံနေတာပဲ..ဒီကြားထဲ လီးကိုပြန်ဆွဲထုတ်ရင် ဘွတ် ဆိုပြီး လေပြန်ထွက်သံကြားတော့ စောက်ဖုတ်ကလည်း အီးပေါက်တတ်တယ်လို့ထင်မိတယ်..။ ခဏနေတော့ ကျုပ်ဆောင့်နေတြဲ့ကားထကဲ မကျင်မြက သူ့ ဖင်ကို နောက်ပြန်ကန်ပြီး ဆောင့်ရင်း သက်ပြင်းရှည်ကြီးချပြီး ငြိမ်သွားတယ်…။ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်သွားရင် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ ခွက်ပြီး ၀င်သွားတာ..လီးကို ပြန်ဆဲထွုတ်တံ့အဲ ချိန် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေက လီးတန်တစ်လျှောက် ကပ်ပြီးပါလာတာတွေကြည့်ရင်း ကျုပ်လည်း မထိန်းနိုင်တော့ဘူး…။ လီးတစ်ချောင်းလုံးကျဉ်တက်လာပြီး စောက်ခေါင်းထဲကို လရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်တော့တယ်..။ ကျုပ်လည်းအ့ဒဲီကစပြီး တစ်ရွာ လုံးက တစ်ခုလပ်တွေ ..မုဆိုးမတွေရဲ့ အသည်းကျော် ဖြစ်သွားတော့တယ်..။ အ့ဒဲီလို ကျုပ်အကြောင်းကြားဖူးတဲ့ အပျိုကြီးတွေ..ဆံရစ်ဝိုင်းလေးတွေပါ ကျုပ်ကို လက်တည့်စမ်းတော့တာပဲဗျာ..။ ပြီးပါပြီ..။
အကောင်းဆုံး ဘဲ မမရီ